HANNOVER MESSE 2019, Hannover, Germany - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Xaddidan
Guriga > Wararka > Wararka
HANNOVER MESSE 2019, Hannover, Jarmalka
1-5 Abriil 2019
Hannover Messe waa carwada ugu wayn ee warshadaha adduunka. Hannover Messe waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah soo bandhigida tignoolajiyadda warshadaha ee Jarmalka. Waxay u muuqataa inay tahay barwaaqo iyo wax-ku-ool tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartan caalami ah, waxaana loo aqoonsan yahay in booska ugu wanaagsan ee helitaanka macluumaadka ku saabsan warshadaha sida loo yaqaan Iyadoo waayo-aragnimo ka badan 50 sano, dhacdada waxaa la filayaa inay ka soo qeybgalaan in ka badan 210,000 oo marti ah. Ku dhawaad ​​1100 oo dalxiisayaal ah waxay yimaadaan 5-ta maalmood ee Hannover Messe. Sidan oo kale, ganacsiyada hogaaminaya ee isbarbar socda, HANNOVER MESSE wuxuu daboolayaa mawduucyo kala duwan iyo bandhigyo badan oo ka duwan dhacdooyinka kale - RD, warshadaynta warshadaha iyo IT, iyo adeegyada, iyo sidoo kale tamarta iyo tiknoolajiyada deegaanka. Haddii aad u baahato labadaba labadaba waxay kugu caawin karaan inaad nagala soo xiriirto. Fursada lagu horumarinayo iibka cusub ee qaybaha kale, helitaanka gaar ah ee alaabta cusub iyo tiknoolajiyada iyo joogitaanka caalamiga ah ee soo jiidata waxay soo jiidataa bandhigayaal iyo martida adduunka oo idil. La soco mid ka mid ah martida cusub ee teknoolajiyada iyo tiknoolijiyada ugu dambeysa. Inkasta oo adduunka oo dhan la isku xiro, ganacsiyada ganacsiga ayaa wali u adeegaya sidii goob dhexe oo loogu talagalay ka qaybgalayaasha suuqa. Waxaan abuurnaa mashaariic noocan oo kale ah - aduunka oo dhan oo ku saleysan shabakad balaaran oo khibrad leh, xirfado gaar ah iyo magac caan ah oo caan ah.
Dhamaan tiknoolajiyada muhiimka ah iyo dhinacyada muhiimka ah ee warshadaha - cilmi baarista iyo horumarinta, farsamooyinka warshadaha, IT, warshadeynta, teknooloojiyada wax soosaarka iyo adeegga farsamooyinka iyo dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa - waxaa laga heli karaa Hannover. Ka faa'iideysi dhammaan waxyaalahii HANNOVER MESSE ay bixiso. Ku soo dhowow goobaha caalamiga ah ee ganacsiga!
Tilmaamaha Qalabka Cuntada Sare Qodobo Dheer ah
Raadinta Maqnaanshaha Qalabka Loogu Talagalay Meelaynta Robotic